Inta badan baaxad weyn oo composers music ee waqtiga oo dhan ku qaatay noloshooda oo dhan ka go'an in ay kaamilka ah ee masterpieces iyo farshaxanka muusikada. Waxa uu waddo dheer oo u sheegay in ay la socdaan dhiirogelin dose caafimaad tayo weheliso dhaqanka heegan ah waa wadadii surefire heer sare. Liiska music composers hoos ku hubaal ah la siin waa inuu marag u noqdo sida qaab ciyaareed.
Wuxuu ku dhashay 1685, Bach ahaa Jarmal laxamiistaha, muusikiiste iyo organist ah. Ugu da'da 51 Augustus III isagii ku kor saarnayd hadlay horyaalka ee "laxamiistaha Maxkamadda Royal". Isaga oo caafimaad iyo aragti ku guuldareystay in uu sano ka dib iyo 1750. wuxuu u dhintay ay walxuhu ka mid ah
Concertos Brandenburg ayaa
Mass ee B Minor
The Isbadalka Goldberg
The alifaadaha iyo Symphonies
Overture in Style Faransiiska
Concerto Talyaani ayaa
Laxamiistaha A boosaska badan, xusuuta ku dhashay Salzburg ee 1756 oo ka kooban in ka badan 600 oo shuqullada. Isaga oo music u taagan sidii archetype ah style Qadiimiga ah. Xaalad uu dhintay hore ahaa kaca Bixinta dahsoon si halyeeyada badan. Qaar ka mid ah shuqulladiisa ugu dhisnaa yihiin
A sonata piano Minor
Symphony Paris ayaa
Biibiilaha Magic ayaa
K. 595 ee B-guri
The trumpet Concerto K. 622
K. 614 ee E-guri
Gulkroppshormon verum ayaa geesinimo Ave K. 618
The diiqid Requiem K. 626
Motet reyreeya, ha farxeen, K. 165
Beethoven waxaa loo arkaa inay ku composers ugu caansan iyo saameynta badan ee waqtiga oo dhan. Waxa uu ku dhashay 1770 iyo tobankii sano ee la soo dhaafay uu noolaa si buuxda DhagaLa'yihiin laakiin kooban ugu dhisnaa shuqulladiisa oo dhan. Shuqullo mustaqbalkiisa compositional ugu caansan waxaa ka mid ah Beethoven
The symphonies koowaad iyo labaad
Concerto Triple ayaa
Laxamiistaha, agaasimaha A Jarmal tiyaatarka iyo kaari, Richard Wagner ee Tristan iyo Isolde arkaa in ay yihiin bilowga music casriga ah. Waxa uu ku dhashay 1813 iyo waxaa loo magacaabay ee Royal Saxon Maxkamadda kaari halka ku nool dhaw. Waxa uu ku qoray operas soo socda
5) Yuusuf Haydn:
Joseph Hayden ahaa laxamiistaha ah Austria oo ku dhashay 1732 iyo inta badan nolosha mustaqbalkiisa uu ka fannaan maxkamadda qoyska Esterhazy ah. Waxa uu ahaa walaalkiis si Michael Haydn, iyo Johann Evangelist Haydn, saaxiib wanaagsan ee Mozart iyo macalinka ee Beethoven. Oo shuqulladiisa loogu dabaal hore waa
Ilaahayaga mooyaane Francis Kaysar
Johannes Brahms waxa uu ku dhashay 1833 oo ahaa perfectionist daarna isaga ay sabab u tahay, taas oo qaar badan oo ka mid ah shuqulladiisii ​​la burburiyey oo la daabicin kale. Waxa uu helay taageero ka dib markii uu Ciyaar ka mid ah Requiem A Jarmalka kaas oo siiyey kalsooni ku filan si ay u buuxiyaan
Trumpet Trio, Op. 114
Trumpet ta, Op. 115
Trumpet Sonatas, Op. 120
Afar halista ah Songs
Kow iyo toban Chorale hordhac
Xabbadood Piano, OPP. 116-119
Afar xarig First
Afar piano Saddexaad
A laxamiistaha Austria goolasha, Franz Schubert waxa uu ku dhashay 1797 laakiin ku dhimatay da'da ah oo aad u yar yar oo ah 31 iyo waxaa soo socda lagu aasay in Beethoven kii uu jeclaa oo aad u badan. Soo duubay ayaa la bixiyo by fanaaniin badan oo heer sare ah loo amaano in laxamiistaha tayo leh taas oo shaqada waxaa ka mid ah
Mass ee A-guri oo waaweyn
Symphony ee B-yar
Sonata in yar A
Octet ee F waaweyn ee
Entertainment ahaa Hungarian
String danbeeyay afar maalmood ee yaryar A
Robert Schumann ahaa laxamiistaha Jarmalka oo inta badan qadarin sida composers weyn Zaman Romantic. Ilaa uu ku dhintay da'da 46 Schumann hagar la'aan iyo xamaasad shaqeeyeen in la abuuro qaar ka mid ah sideeda ugu fiicneyd abid. Ka dib markii mid ah uu ugu caansan yihiin.
Album u Dhalinyarada
Isagoo ka kooban in ka badan 40 operas intuu noolaa Handel waxaa aad loogu yaqaanaa inuu oratorios, heesta iyo concertos xubin. Si kastaba ha ahaatee, isagu marnaba la sameeyaa opera Talyaani ah ka dib markii uu guul giddy Masiixa. Shaqadiisii ​​ugu caansan ee xilligii Baroque yihiin
Alexander ee Ciidda
Music for Rashka Royal
Markaasaa wadaadkii Saadooq ahaa
Ha ii ooyina,
Ultrecht Te Deum iyo Jubilate
Digil di Gaul
Inkastoo laxamiistaha a Ruush, Tchaikovsky marnaba helay aqoonsi ka mid ah Russia sababtoo ah waxa ay sheegtay in music ahaa sumcaddiisu saameyn reer galbeedka. Si kastaba ha ahaatee, Shuqulladiisa oo isugu darey weyn sida waxa soo socda sii wado in la isticmaalo music masrixiyada adduunka oo dhan.
Vakula Smith ah
Isbadalka on a Mowduuca Rococo
Mandelssohn maanta qiray sida composers ugu caansan ee Zaman Romantic. Waxa uu aasaasay Conservatoire Leipzig in hadda waa University of Music iyo Tiyaatarka Leipzig. Waxa uu ahaa awow u ahaa falsafo caanka Muuse Mendelssohn, oo uu si fiican u shaqeysaa yaqaan waxaa ka mid ah
Songs aan Words
Octet xarig ah
Overture A midsommar Night ee Dream
Overture in Ruy Blas
The laba aan eeddo
AUD ayaa Hoyashada dibadda
Dvorak ahaa laxamiistaha ah Czech oo ku dhashay 1841. Wuxuu ahaa borofisar wax ka dhiga Prague Conservatory. Xabbadood ee ugu guulaha badan qolkiisii ​​music, Dumky Trio, waxay isagii hor geeyeen inuu u dhaqaaqo Mareykanka si uu u noqdo agaasimaha Conservatory Qaranka ee Music of America ee New York City. Waxa uu caan ku ah soo socda.
Songs hooyaday way i baray
Laga soo bilaabo Adduunka New
String danbeeyay afar American
Liszt ahaa laxamiistaha ah Hungary kaasoo ahaa mid aad u fiican u hor wakhtigii uu in uu aqoon sare iyo farsamo kale biyaaniiste. Waxaa ka mid ah uu keenay badan waa been abuurtay oo ka mid ah gabayada symphonic ama doorkiisii ​​oo dhanba. Inkastoo biyaaniiste caanka ah uu sidoo kale la aqoonsan waayo, shuqullada soo socda.
Angiolin ka xidhan degay
Waxaan jeclaa maalin uun halkaas u aadayo
Laga soo bilaabo Cradle in qabriga
Ilihii d'Vila ee Este
Aaska March, xusuustii Maximilian
Chopin loo yaqaan biyaaniiste virtuoso ee xilligii Romantic ah laakiin inuu ka doorbido jawiga salon ka sii qoto dheer. In kasta oo u dhashay reer Poland ee 1810 uu helay dhalashada Faransiiska da'da 25. Aqlabiyad badan ee ay walxuhu u ahaayeen piano Solo oo sidoo kale ka mid ah
Stravinsky ahaa laxamiistaha, biyaaniiste iyo kaari ah oo uu ku guuleystay Royal Society furay Gold Bilad 1954 Waxa uu ku guuleystay abaalmarino badan oo ay ka mid Grammy Achievement Lifetime darjada ah. Waxa uu si buuxda uga qeyb nolosha mustaqbalkiisa. Qaar ka mid ah shuqullada caan yihiin
Faun iyo ilaalin
Horumarka qaadin ee
Verdi ahaa laxamiistaha Talyaani ah opera. Uu saameyn muusikada in ay u hadha uu ahaa xadidan. Si kastaba ha ahaatee, saddex kaydka Talyaaniga ayaa la odhan jiray ka dib iyo operas waxaa inta badan waxay fuliyeen oo adduunka ah. Inkasta oo aan la aqoonsan yahay oo ay in badan oo ka mid ah dadka dhaleeceeya casriga ah uu operas soo socda ayaa waxay caan ku raacay.
Mahler ahaa laxamiistaha ah Austria oo gudbi ama qaabka qarnigii 19aad iyo 20aad ee music dhexeeya Austro-German dhaqanka iyo modernismen. Uu dhowr sano ee la soo dhaafay uu ku qaatay sida agaasimaha New York looga furay iyo New York ee Metropolitan Opera. Shuqulladiisa oo sannadihii ugu danbeysay ee caan ahaayeen qaar ka mid ah oo kala ah:
The Ninth iyo Symphonies tobnaadna
The songs Ruckert
Songs ee Musaafurka Gas Ellen wareegga hees
Song of baroor
Wunderhorn Knaben ayaa
Lieder iyo song
Prokofiew ahaa Russian laxamiistaha, biyaaniiste iyo kaari waa kuwa qaataha abaalmarino badan oo ay ka mid yihiin lix Stalin Abaal iyo Lenin Prize oo la darjada siinay. Inta lagu guda jiro nolosha mustaqbalkiisa Prokofiew soo saaray shuqullada soo socda in isaga laxamiistaha ugu weyn ee qarnigii 20-dhigay.
March ka Love muddo saddex Liinta
Suite ayaa Lieutenant Kije
Ballet Romeo iyo Juliet
Peter iyo Wolf ah
Todoba, iyagu waxa weeyaan toddoba
Shostakovich ahaa laxamiistaha a Ruush iyo biyaaniiste caanka ah ee qarnigii 20-aad oo xiriir buuqa dowladda ee Soviet Union. Abaalgudyo badan ayaa la hadlay isagii ku kor saarnayd oo ay ku jiraan abaalmarino Lenin iyo Stalin. Shuqulladiisa oo ka mid ah masterpieces sida
Lady Macbeth ee Degmada Mtsensk
Suite on Dulucda Finland
Laga soo bilaabo Yuhuudda Poetry Folk
Gogol dhigga si ay u opera ah "Orangutan"
Strauss, laxamiistaha ugu Jarmal, wuxuu ahaa weyn beertiisa intii uu noolaa qeybtii 1aad ee qarnigii 20-aad. Wuxuu ku dhashay 1864, laxamiistaha tan waxaa loo yaqaan shuqulladiisa in operas kuwaas oo qaar ka mid ah ayaa loo tixgeliyaa in muran iyo kuwa kale qaar ka mid ah fisqi. Qaar ka mid ah uu operas kale caan yihiin
Geeri iyo isbeddelid
Ilaa Eulenspiegel ee yuul dheel dheel ah
A Hero ee Life
Berlioz waxa uu ku dhashay sanadkii 1803 oo ahaa laxamiistaha ugu weyn ee Faransiiska oo kaalin muhiim ahaa uu isugu darey fanatastique Symphonie iyo Grande messe des morts. Waxa uu dadku ma aqbalo intii uu noolaa, Si kastaba ha ahaatee, inta lagu guda jiro bicentenary uu ku dhashay, Shuqulladiisa soo socda ayaa waxa uu qiray.
Istusid La de Faust
"Symphony riwaayado" Romeo iyo Juliet
Harold ee Italy
Carnival Roman ayaa
Enfance Oratorio L'du Masiix
Debussy ahaa laxamiistaha Faransiis ah oo la xiriirtay music impressionist. Waxa uu caan ka oo uu isku waslad loo yaqaan Teegeero classic iyo asalka apres-midi faune ah d'un l'. Shuqullada soo socda inta lagu guda jiro nolosha mustaqbalkiisa uu isaga u taagay inuu sida composers horeeysa ee uu ka qabno.
Puccini u dhigay heerka caalamiga ah ee operas. Waxa uu ahaa laxamiistaha Talyaani ah oo uu shaqada horumariyo style verismo ah. Fanaanada weyn ee Reer Maraykan ah oo ah agaasimaha Harry Dunstan aasaasay Center American ah ee waxbarashada Puccini sanadkii 2004. Oo shuqulladiisa ugu caansan yihiin kuwa soo socda:
Legend waxa ay leedahay in Palestrina, laxamiistaha Talyaani ah oo muusiko ah muqadas ah, ayaa waxaa loo arkaa in ay 'Badbaadiyaha Church Music' ah. Wuxuu ku dhashay 1525 badan oo uu naftiisa uu ku qaatay ee Rome. Waxa uu ka kooban 105 tacsida, 68 offertories iyo 140 madrigals. Qaar ka mid ah shuqulladiisa muhiim ah ee soo socda.
Hadda anoo addoonkaaga ah
Waxaa loo tixgeliyaa in ay "Doqonku bar, bar Ilaah" ka duwan xag kale muusikada, Bruckner ahaa laxamiistaha ah Austria oo aad u jeclaa by composers xiga. Nazi ayaa si adag u ansixiyey uu music. Oo shuqulladiisa ka dib markii ay ka tarjumaysaa uu xayi ah diinta.
Settings shan Zabuur
Baashaal ah Cantata
Siddeed saldhigyo Ergo Tantum
Saddex goobaha Masiixa addeecay inuu noo
Saddex saldhig oo Ave Maria
Telemann, laxamiistaha Jarmalka oo multi-instrumentalist la sheegay in ay tusaale u ah ku raad xuquuqda daabacaadda gaar ah oo ka fiirsaneysa shuqullada muusikada sidii hantida aqooneed ee laxamiistaha ee. Uu liiska ugu caansan waxaa ka mid ah operas soo socda:
Ferdinand iyo Isabella
Jupiter iyo Semele
Saint-Saens, laxamiistaha Faransiiska u dhashay ee 1835, waxaa la sameeyey la Chevalier oo ka mid ah Legion of Honor da'da 32 iyo waxaa lagu sharfay Order Ingiriiska Victoria ee 1902. Waxa uu ka kooban xabbadood-wanaagsan ee loo yaqaan badan oo dhexaad u ahaa samaynta dhan ah sifayn cusub oo muusiko ah. Waxaa ka mid ah:
The Carnival xoolaha
Princess Yellow ayaa
Samson iyo Deliilaah
Sibelius ahaa violinist ah Finnish iyo laxamiistaha buray horumariyo dareen aqoonsiga qaranka ee Finland. Tan iyo 2011 Finland ayaa u dabaal 8th December Maalinta Calanka ee xuska dhalashadiisa. Waxa intaa dheer in symphonies uu, uu walxuhu ugu fiican u yaqaan waxaa ka mid ah kuwan soo socda.
The Swan ee Tuonela
Virgo ayaa munaaraddii
Ravel ahaa Faransiis laxamiistaha, biyaaniiste iyo kaari ahaa oo inta badan la xidhiidha impressionism. Waxa uu si aad u wanaagsan oo aan ka mid contemporaries uu ixtiraamo. Waxa uu og yahay in ay diiday abaalmarino badan oo ay ka mid d'Legion ee honneur oo dhan sharaf gobolka ka France. Oo shuqulladiisa caanka ah waa kuwan soo socda.
Pictures ee Exhibition ah
Ma Diintooda l'Oye
Adelaide ama afka ubaxyo
Rossini ahaa laxamiistaha Talyaani ah oo lagu tirinaya inuu ugu laxamiistaha ugu opera ugu caansan ilaa uu ka fariistay 1929 Waxa uu ku qoray 39 operas, cabsi music Oo qowladda music. Rossini ahaa Grand Sarkaalka of Honor Legion ah. Shuqulladiisii ​​ugu caansan waxaa ka mid ah kuwan soo socda.
The Barber ee Seville
Muuse iyo Fircoon
U sheeg Guillaume
Aureliano ee Algiers
Waa run in shuqullada muusikada oo ka composers caan hor joogsaday tijaabada waqtiga. Waxay ka waqti aan la xusuusan la qadarin sida qaar ka mid ah masterpieces ugu weyn ee farshaxan waxay leeyihiin. Waa maxay siman oo xiiso leh iyo xusid mudan waa maqnaanshaha dumar ah hal artist ka mid ah 30 composers sare music. Tani dabcan laga yaabaa in aanay music inay dhegaha dadka badan ee. Si kastaba ha ahaatee, taasi oo gudaheedana sinaba uma dhimis xad ka gaadhin ay composers music kor ku xusan.
Top 10 Free Torrent Goobaha
Sida loo Download ka Soundcloud Chrome si toos ah
Top 10 Composers Romantic oo ay caan ku music Qadiimiga ah
3 Siyaabaha la soo saaro audio ka CD
> Resource > Music > Top 30 Music Composers oo ay Music Qadiimiga ah oo caan ku